MWC 2019 မတိုင်မီ LG Q60 ၊ LG K50 နှင့် LG K40 တို့ကို ကြေညာလာ – YANGON STYLE
MWC 2019 မတိုင်မီ LG Q60 ၊ LG K50 နှင့် LG K40 တို့ကို ကြေညာလာ
LG ဟာ လာမယ့် MWC 2019 ပွဲမှာ LG G8 ThinQ နှင့် LG V50 ThinQ 5G စမတ်ဖုန်းတို့ကို ကြေညာသွားပါမယ်။ LG ဟာ ယင်းဖုန်းများကို မကြေညာခင်မှာ အလယ်အလတ်တန်း စမတ်ဖုန်းသစ်3မျိုးတို့ကို ကြေညာလာပါတယ်။ LG Q60 ၊ LG K50 နှင့် LG K40 တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
(1). LG Q60
LG Q60 မှာ ထူးခြားလာတာကတော့ ကင်မရာပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောဘက်ကင်မရာသုံးလုံး ပါ၀င်လာပါမယ်။ အဓိကကင်မရာဆင်ဆာက 16MP ဖြစ်ပြီး ကျန်ကင်မရာနှစ်လုံးက 5MP Ultra-Wide Angle Lens နှင့် 2MP Depth Sensor ဖြစ်ပါတယ်။ အလယ်အလတ်တန်း စမတ်ဖုန်းဖြစ်တာနဲ့အညီ ကင်မရာအမြင့်စား မသုံးလာတာ အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
Q60 မှာ မျက်နှာပြင် 6.26 လက်မ 19:5:9 Aspect Ratio FullView Display ၊ Waterdrop Notch သုံးထားပါတယ်။ ဒီဖုန်းက Waterdrop Notch သုံးထားတဲ့ ပထမဆုံး LG စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ Notch အတွင်းမှာ ရှေ့ကင်မရာ 13MP ပါ၀င်ပါတယ်။ HD+ ရုပ်ထွက် သုံးထားပါတယ်။ 2.0GHz Octa-core Processor နှင့် အထိုင်ချထားပါတယ်။ Chipset အမည်ကိုတော့ မပြောကြားထားပါဘူး။ RAM 3GB နှင့် Storage 64GB ပါ၀င်ပါတယ်။ micro SD မှ ထပ်တိုးလို့ ရပါမယ်။
ကျောဘက်မှာ လက်ဗွေရာစနစ်ပါ၀င်ပြီး ဘက်ထရီ 3500 mAh ပါ၀င်ပါတယ်။
(2). LG K50
LG K50 က Q60 နှင့် မျက်နှာပြင်နှင့် ရုပ်ထွက် အတူတူဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းကိုလည်း Octa-core Processor နှင့်ပဲ ပါ၀ါထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ RAM 3GB နှင့် Storage 32GB ပါ၀င်ပါတယ်။ ကျောဘက်ကင်မရာနှစ်လုံးပဲပါ၀င်ကာ 13MP + 2MP ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဗွေရာစနစ်ကို ကျောဘက်ကင်မရာနှစ်လုံးအောက်မှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
ရှေ့ကင်မရာ 13MP နှင့် ဘက်ထရီ 3500 mAh ပါ၀င်ပါတယ်။
(3). LG K40
LG K40 မှာ မျက်နှာပြင် 5.7 လက်မ HD+ FulView Display သုံးထားပါတယ်။ Notch မပါ၀င်ပါဘူး။ ကျောဘက်ကင်မရာ 16MP တစ်လုံးတည်းပဲပါ၀င်ပြီး ရှေ့ကင်မရာက 8MP ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာနှစ်ဖက်စလုံးအတွက် LED Flash ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။
2.0GHz Octa-core Processor ၊ RAM 2GB နှင့် အထိုင်ချထားပြီး Storage 32GB ပါ၀င်ပါတယ်။ ဘက်ထရီ 3000 mAh ပဲ ပါ၀င်ပါတယ်။ လက်ဗွေရာစနစ်ကို ကျောဘက်မှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
ဖုန်းသုံးမျိုးလုံးမှာ DTS:X 3D Surround အသံထောက်ပံ့ထားပြီး Google Assistant အတွက် ခလုတ်ပါ၀င်ပါတယ်။ MIL-STD 810G ထောက်ခံချက် ရရှိထားပါတယ်။ စျေးနှုန်းနှင့် ဘယ်တော့ရောင်းချမယ်ဆိုတာ မကြေညာသေးပါဘူး။
လာမယ့် MWC 2019 မှာ ကြေညာလာဖို့ ရှိပါတယ်။